Tsy misy fitsaharan-tena avy amin'ny hotelinao mankany Airport Basel - avy amin'ny 40.- CHF
Tolotra mivantana mivantana avy eo amin'ny vavahadin'ny seranana na hotely
Raha vantany vao tonga any Basel any amin'ny seranam-piaramanidina na ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby isika dia hitondra ny adin-tsika handeha. Miandry anao amin'ny fahatongavana terminal ianao ary hanamaivana anao amin'ny dianao amin'ny alàlan'ny fanomezana anao ny entanao ho any aminay sedan manampy. Avy any dia manangona anao any amin'ny hotely na toerana misy anao ianao. Ny mpitaingina mpamonjy anao dia ho faly hanampy ny entanao mandra-pahafatiny.
Tsy misy fiatrehana avy amin'ny hotelinao mankany amin'ny Airport Basel
Raha vao te-hamarana ny fijanonanao any Basel ianao ary mandeha fiaramanidina, dia miditra ianao Fandefasana an'i BaselMiverina indray ianao amin'ny kalitao efa mahazatra ary amin'ny fananana rehetra azo jerena. Ampy hahafantarana anao ny fangatahanao fangatahana amin'ny ora farany alohan'ny fivoahanao any amin'ny hotely. Ary mba tsy hanahiran-tsaina anao ny hahazo vola ampy amin'ny vola izay mety ho vahiny aminao, dia faly izahay manolotra karama amin'ny carte de crédit.
Afaka mametraka mora foana ny famandrihana an-tserasera ianao. Izahay dia tsy andrinay izay hahatonga ny dia hahasambatra anareo.
Ny ekipan'ny mpandika-teny avy any Basel
Notsongaina tamin'ny: Basel Airport mivezivezy Limousine service
taxi.flughafen March 9, 2017 March 16, 2017 Basel, Airport mivezivezy, Limousine service No comments
← Airport Shuttle ho an'i Zurich sy Basel
BASELWORLD 2018 - Mahafinaritra ny mandeha fiara miaraka amin'ny Trans-Service Basel →